Zlatan Ibrahimovic Ma Ku Sii Nagaan Doona Kooxdiisa Man United Oo Qandaraas Cus,, - Wargane News
Home Sports Zlatan Ibrahimovic Ma Ku Sii Nagaan Doona Kooxdiisa Man United Oo Qandaraas...
Zlatan Ibrahimovic ayaa sheegay “Ineysan jirin wax heshiis ah uu kordhiyay kooxdiisa wali” laakin wuxuu cadeeyay inuu isaga fuliyay in qandaraaskiisa kooxda Manchester United la dheereeyo laguna daro sanad dheeri ah oo ay ku heshiiyeen isaga iyo kooxdaasi markii uu imaanayay sanadkii h–e,
Jimcihii ayee aheyd markii uu macalinka United, Jose Mourinho sheegay inuu ku kalsoon yahay in Ibrahimovic uu sii joogi doono kooxda Old Trafford ku ciyaarta xili ciyaareedka danbe ee 2017/18 laakin xidiga 20-gool dhaliyay ayaana wali qalinka ku duugin heshiiskaasi.
Zlatan ayaa la weydiyay inuu ku dhibtoonayo inuu qandaraaska u kordhiyo kooxdiisa ayaa yiri “Sidaas ayeey u muuqataa, waa inaan dhaliyaa 100 gool”.
“Dookha heshiis kordhinta waa mid aan wada qaadanay laakin wali wax si rasmi ah loo sameeyay ma jiraan”.
Markii la weydiyay sababta uusan ilaa haatan heshiiska u kordhin, Ibrahimovic ayaa yiri “Waa aniga xageyga wax ka taagan, aan aragno sida ay wax noqdaan, waan sugeenaa” sida lagu daabacay Sky Sports.
Marka laga soo tago gooldhalin iyo caawinaad, Ibrahimovic ayaa sidoo kale saameyn buuxda ku yeeshay da’yarta Man United waxaana kamid ah dadka wax ka barta weeraryahanka xaalada ay ku xun tahay ee Anthony Martial, Zlatan ayaana la weydiyay xaalada da’yarka ree France wuxuuna yiri “Madaxiisa hoos uma raaracsana, wali samaha ayuu ka fakarayaa, si adag ayuuna u tababar qaadanayaa, wuxuu doonayaa inuu ciyaaro”.
“Aniha iyo isaga si gaar ah uma aynaan fariisan, waqtiga tababarka, waqtiga cunada, waan is garab fariisanaa, qof waliba wuxuu heystaa fursad uu kula hadlo qofka kale, qof waliba wuxuu niyada u dhisaa kan kale, waxaan nahay xirfadleyaal sidaasi darteed waa iney naga muuqataa xirfadlenimo”.